Tag: ecommerce ndepụta Syndication | Martech Zone
Mmekọrịta ndepụta ecommerce
Ngwaahịa: Syndication Ọdịnaya Ngwaahịa na Nchịkwa Nri
Sọnde, Septemba 23, 2018 Sọnde, Septemba 23, 2018 Douglas Karr
N’usoro nke Ajụjụ ọnụ Martech ọnwa gara aga, anyị nwere onye nkwado - Productsup, usoro njikwa njikwa faili ntanetị. Egwuregwu Ecommerce dị mgbagwoju anya n'oge a, na-emesi ike ọsọ, ahụmịhe onye ọrụ, nchekwa na nkwụsi ike. Nke ahụ anaghị enyekarị ohere maka ịhazi ya. Maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ecommerce, ọtụtụ ahịa na-eme na saịtị. Dịka ọmụmaatụ, Amazon na Walmart, bụ saịtị ebe ọtụtụ ndị na-ere ecommerce na-ere ngwaahịa karịa karịa na ha